Sri Lanka: Natao Fahirano Ny Toeram-piasan’ny Firenena Mikambana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 13:08 GMT
Sarin'ny Groundviews ampiantranoan'ny YFrog
[rohy amin'ny teny anglisy]
Nanomboka fikomiana tsy hisakafo manodidina ny toeram-piasan'ny Firenena Mikambana ao Kolombo (jereo eto ny sary) ny Minisitra Sri Lankey miandraikitra ny Trano Fonenana, Wimal Weerawansa, mpitarika ao amin'ny National Freedom Front (NFF, MAndatehezan'ny Fahafaham-Pirenena), mba hanoherana ny kaomisiona mpanadihady napetraka mba hanadihady mikasika ireo heloka bevava an'ady ahiana ho nataon'ny fanjakana sri lankey nandritra ny ady an-trano nampifanandrina azy tamin'ny LTTE.
Lasibatry ny tsikera ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, Ban Ki-moon , satria tamin'ny 22 jona farany teo, namolavola kaomisiona mpanadihady nahitana matihanina toy ilay Indoneziana Marzuki Darusman, ilay afrikana tatsimo Yasmin Sooka sy ilay Amerikana Steven Ratner izy. Ny hanasokajy ny fanomezana ny andraikitra tamin'ny fifanitsakitsahana ny zon'olombelona izay toa natao nandritra ny ady an-trano niseho teo amin'ny fanjakana sy ireo mpanohitra avy ammin'ny LTTE no tanjony. Voafetra ho amin'ny fanomezana torohevitra ny Sekretera jeneraly ary tsy natao hitady vaovao na hanao fanadihadiana ny fahefan'ny kaomisiona mpanadihady fakànkevitra.
Nampihatra tsindry lehibe tamin'ilay kaomisiona mpanadihady ny fanjakana sri lankey tamin'ny fanambaràna fisianà ‘tsy fahaiza-mitantana tsy misy ilàna azy’ sy fandikana ny satan'ny Firenena Mikambana. Ny marain'ny 6 jolay 2010, nohodidinin'ny NFF ny toeram-piasan'ny Firenena Mikambana tao Kolombo, sady nanereny mpiasa sasany hiasa avy any an-tranony. Ny 8 jolay, tamin'ny andro faha-3-n'ny fahirano, ireto no fanehoankevitra vitsivitsy an-tambajotra.
Mitantara ny Groundviews, vavahadin-tserasera ho an'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra ao Sri Lanka:
Ny 30 jona, nomporisihan'ny minisitra Wimal Weerawansa ny olona maro hanodidina ny toeram-piasan'ny Firenena Mikambana ao Kolombo sy haka an-keriny ireo mpiasa mandra-pihongan'ilay kaomisiona mpanadihady, mametraka ny Firenena Mikambana ho anaty fanairana mena tao Sri Lanka. Tamin'izany andro izany ihany, nanambara i Farhan Haq, mpitondra tenin'ny Firenena Mikambana fa rehefa nanontany ny fanjakana momba ity fanambaràna ity ny Firenena Mikambana, nanome antoka ity farany fa hevitra manokana avy amin'ny Minisitra Weerawansa izany.
Nanomboka tamin'ny 6 jolay ny fahirano nataon'ny NFF; nalaina ary nampiakarin'ny Vikalpa, haino aman-jerin'olontsotra miorina ao Sri Lanka, tao amin'ny Youtube ny lahatsary mampiseho ny korontana naterak'ireo fihetsiketsehana.
Nanaitra ny governemanta sri lankey ny Firenena Mikambana momba ireo fibahanan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny toeram-piasan'ny Firena Mikambana, raha ireo ao amin'ny governemanta kosa indray nanome toky an'ireo tarika avy amin'ny Firenena Mikambana fa ho tsara aro izy ireo.
Kanefa, mihevitra i Indrajit Samarajiva avy ao amin'ny Indi.ca fa nahazo ny fanohanan'ny fanjakana ilay fihetsiketsehana manohitra ny Firenena Mikambana.
Manampy ny Groundviews:
Momba ireo fihetsiketsehana ireo, nozarain'ny ny tranonkala Lanka Truth ny lahatsoratra momba ny antso an-tariby izay toa nandraisan'ny rahalahin'ny Filoha anjara, ilay kivalavala Gotabaya Rajapaksa,, izay nibaikoana mivantana ny Polisy mba hiala teny amin'ny manodidina ilay toeram-piasan'ny Firenena Mikambana. Toy ny asongadin'i Lanka Truth,
« Toa fantatry ny fanjakana ihany kay ilay fihetsiketsehana nitranga teo anoloan'ny toeram-piasan'ny Firenena Mikambana. Lasa mazava ho azy izany rehefa naka feo ny fandrahonana an-telefaona nataon'ny Sektreteran'ny Fiarovana taminà polisy iray ny mpanao gazety iray.
Mamaritra ny tombontsoa politika azo avy amin'ireo fihetsiketsehana ireo ilay blaogeran'ny The End:
Hilaza aminareo ireo mahafantatra an'i Weerawansa sy ireo mahafantatra ny lazan'ny fidirany amin'ny fihetsiketsehana toy izao hoe mitovy amin'ny vato alatsaka anaty farihy iray lehibe izany . Miteraka onja vitsivitsy, fa manohy ny lalana ilay trondro ary andro iray hafa vao ho faty. Avy amin'ny fototra mpifidy azy no hitazonan'i Weerawansa ny maha-ara-drariny azy ary navotany ny lazany. Holazain'ny fanjakana amin'ny vahoaka fa miady amin'ny famoretan'ny vahiny izy, hanoratra ao anatin'ny tatitra natokany ho an'ny mpamatsy vola ireo tafavoaka velona avy amin'ireo ONG fa mampihorohoro ny toejavatra miseho ary mila vola izy ireo. Resa-boala foana izany.
Milaza i Tisaranee Gunasekara ao anatin'ny Sri Lanka Guardian fa mila mahita fahavalo hafa ao anatin'ity vanim-potoana aorian'ny LTTE ity ny fanjkana mba hanamafisana ao amin'ny asany ny fitondran'i Rajapakshe: «Mila fandrahoanana sy fahavalo ry zareo mba hamenoany ny faharefoany ara-toekarena sy ny fikaviaviany ara-politika sy diplaomatika, ary amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ka hatrany amin'ny fahaverezan'ny SGP+ (Rafitra Jeneralin'ny Fisafidianana manokan'ny Firaisambe Eoropeana)»
Araka ireo lahatsoratra an-gazety sasany, hihaona tsy ho ela ireo mpikambana telo ao amin'ny kaomisiona mpanadihady avy amin'ny ONU mba hiresaka mikasika ny fe-potoana iasan'izy ireo mialohan'ny tena iasany , na eo aza ireo fihetsiketsehana ao Kolombo. Ho hita eo ny fomba hivahan'ity fifanenjanan-tsandry ity.